I-Ultrasonic Malting neMalt Germination - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Malting iyinkqubo echitha isikhathi: ukugcoba nokuhlunga kwembewu yokusanhlamvu kuthatha isikhathi esiningi futhi kutholakala imiphumela engafani kahle.
Nge-ultrasonication, isivinini sokuhluma, izinga kanye nokuvunwa kwebhali kungenziwa ngcono kakhulu.
Ukudla okusanhlamvu / okusanhlamvu kusetshenziselwa ukwenza ubhiya, i-whisky, ukugwedla okungenalutho, uviniga we-malt, kanye nesithako sokudla. Ngesikhathi senqubo yokulimaza okusanhlamvu okomisiwe (isib. Ibhali) igxila emanzini ukuqala ukuhluma. Ngenkathi kukhululwa ama-enzyme ekhona, ukukhiqizwa kwamakhemikhali amasha, futhi izindonga ze-endosperm zisephukile ukuze zikhulule okuqukethwe kwamaseli kanye nokwephula amaprotheni amanye agcinwe abe amino acid. Uma izinga elithile lokuhluma selufinyelelekile, inqubo yokuhluma inqanyulwa inqubo yokomisa. Nge-malting okusanhlamvu, ama-enzyme – okungukuthi i-α-amylase ne-β-amylase – okudingekayo ukuguqula izinhlamvu zokusanhlamvu zibe ushukela zakhiwa. Izinhlobo ezihlukahlukene zikashukela zihlanganisa i-monosaccharide glucose, i-maltose engacacile, i-maltotriose ye-trisaccharide, neshukela eliphakeme elibizwa nge-maltodextrines. Ukugxila nokuhluma kokusanhlamvu kuyisikhathi esiningi, kucabangela ukuthi ukuqhuma kuthatha izinsuku ezingu-1-2 futhi ukuhluma kuthatha izinsuku ezingaphezulu kwezinsuku ezingu-4-6. Lokhu kwenza ukukhiqizwa kwe-malt kudle isikhathi futhi kubize.
Ukukhishwa Kwe-Malting Okuthuthukisiwe
I-Sonication ithuthukisa amandla okuhluma kanye nesivinini sezinhlamvu zebhali.
Ukushesha Okusheshayo Ncono
Ukuhluma Okuphelele Kakhulu
Izinga Lokususa Okuphakeme
I-Quality Quality Malt
Lezi zimphumela eziqalisiwe ezibangelwa yi-enzymatic umsebenzi othuthukisiwe kanye nama-fissures amancane ayenziwa yi- cavitation ultrasonic embewu. Ukudla kwebhali kungathatha amanzi amaningi esikhathini esifushane, okuholela ekubaluleke kakhulu i-hydration ethuthukisiwe wembewu. I-hydration esheshayo ngisho nokuhluma kubalulekile kumkhwalithi omuhle we-malting kusukela imbewu engenayo ifinyelela emonakalweni we-bacterial and fungal.
I-Malting yinqubo eyinkimbinkimbi efaka ama-enzyme amaningi; Okubalulekile yi-α-amylase, i-β-amylase, i-α-glucosidase, futhi i-dextrine yomkhawulo. Ngesikhathi se-malting, ibhali lithatha inqubo ephelele yokuhluma yemvelo ehilela uchungechunge lwe-enzyme ukuchithwa kwe-barley kernel endosperm. Njengomphumela walokhu kuhlaziywa kwe-enzyme, izindonga ze-endosperm zisezingeni elibi, futhi ama-starch granules akhululwa ematrix we-endosperm lapho afakwa khona. I-Ultrasonics isebenza nge-enzyme futhi ithuthukise izinga lokufakelwa kwezinto ezingaphakathi kwe-intracellular, isib. Isitashi, amaprotheni. Ama-moleinoli e-Arabinoxylan avame ukwenza ama-macromolecular aggregates ezixazululeni izixazululo ze-polysaccharide. I-Ultrasonication isiza ukunciphisa ama-polysaccharides ngokuphumelelayo. Ngokwehla kwesitashi se-polysaccharide, ama-carbohydrate enothekayo akhiqizwa. Ama-carbohydrate anjalo aguqulwa abe utshwala esiteji sokuvuthwa kokukhiqiza ubhiya.
Yonke le miphumela ye-ultrasonic kwizinqubo ze-bio-chemical ngesikhathi se-malting ku-a isikhathi esifushane sokuhluma futhi a izinga eliphezulu lokuhluma / isivuno. Ukunciphisa isikhathi sokuhluma kubangela ukuthi kubalulekile izinzuzo zezohwebo embonini ye-malting nokuphuza.
Yaldagard et al. (2008) ibonise ukuthi i-ultrasonics “inamandla okusetshenziselwa izinqubo zokulimaza njengendlela yokuphatha imbewu ukunciphisa isikhathi sokuhluma nokuthuthukisa iphesenti yokuhluma okuphelele.”
Ukuhluma okusheshayo nge-sonication
Uhlelo lwe-Ultrasonic Barley Seed Priming Protocol
Imbewu yebhali Hordeum vulgare (9% okuqukethwe komswakama; kukhishwe ekamelweni lokushisa izinyanga ezintathu emva kokuvuna)
Idivayisi ye-ultrasonic UP200H (200W, 24kHz) ifakwe i-sonotrode S3 (ukuma kwe-radial, ububanzi obuyi-3mm, max. Ukujula ukujula 90mm)
Iphuzu lepondo labhapathizwa cishe. 9 mm kwisisombululo senqubo ehlanganisa imbewu yamanzi kanye nebhali. Zonke izilinganiso zenziwa kuma-sampuli (imbewu engu-10 g yebhali) yahlakazeka ngamamitha angu-80 wamanzi kampompi nge-sonication ngqo (isimiso se-probe) ekufakweni kwamandla okungama-20, angu-60, no-100%, ngokuthungeka okungeziwe noma ukuthuthumela. Lokhu kwaqashwa ukugwema ukuma amagagasi noma ukwakheka kwezifunda ezikhululekile ukusabalalisa okufanayo kufana namagagasi e-ultrasonic. Idivayisi ye-ultrasonic isethelwe kwimodi ye-pulsation, isebenzisa ukulawula umjikelezo womsebenzi, ukuze kuncishiswe ukwakheka kwama-radicals mahhala. Umjikelezo wabekwa ku-50% kuwo wonke ama-test. Isixazululo senziwa ngokushisa okungapheli kwama-30 ° C ngo-5, 10, no-15. [Yaldagard et al. 2008]
Ukwelashwa kwe-ultrasonic kubangela ukuhluma okuphakeme nokuhluma okusheshayo ngesikhathi esifushane.
Ukuhluma kwembewu ephakeme kakhulu (cishe i-100%) ibhalwe phansi ku-100% ukusethwa kwamandla. Ukuze imbewu ihlinzekwe ngamaminithi angu-5, 10, no-15 ngamandla aphelele (ukufakwa kwamandla kagesi angu-100%), izinga lokuhluma landa kusuka ku- ~ 93.3% (imbewu engabonisiwe) ku-97.2%, 98% no-99.4%, ngokulandelana. Le miphumela ingase ibangelwe yimiphumela yemishini ngenxa ye-cavitation eyenziwe nge-ultrasonically eyandisa ukwanda kwamanzi ngamadonga eseli. I-sonication ithuthukisa ukudluliselwa kwamanzi futhi yenza kube lula ukungena kwamanzi ngokusebenzisa udonga lwamaseli ukuya ngaphakathi kweseli. Ukuwa kwamabhulebhu e-cavitation eduze kwezindonga zezingqamuzana kuphazamisa isakhiwo seseli futhi kunikeze amandla okudluliselwa okuhle ngenxa ye-ultrasonic liquid jets.
Indlela yanciphisa kakhulu isikhathi esadingeka ukuqala ukuhluma kwembewu. Izimpande zezinwele zavela ngokushesha emasampula aphathwe futhi zakhula kakhulu ngokuqhathaniswa nembewu engezona enezinhlamvu. Uma usebenzisa ibhali ephathwayo njengenhla, isikhathi sokuhluma sanciphisa izinsuku ezinhlanu kuya kwezingu-5 (kuye ngokuthi amandla ase-ultrasonic kanye nesikhathi sokuchayeka) kusukela ezinsukwini ezingu-7 ezijwayelekile. Ngaphezu kwalokho, isikhathi sokuhluma sisho ukuthi sehlile kusukela ezinsukwini ezingama-6.66 ukuze kube khona ukusethwa kwamandla angu-20% kuya kwezinsuku ezingu-4.04 zokubeka amandla okushisa ama-ultrasonic angu-100% ngemuva kwesikhathi sokucutshungulwa kwamaminithi angu-15. Ukuhlaziywa kwedatha eholelekile kubonisa ukuthi isikhathi sokuhluma kanye nesikhathi sokuhluma sithinteka kakhulu yizilungiselelo ezahlukene zamandla e-ultrasonic ngenkathi kuhlolwa ukuhluma. Zonke izivivinyo zaholela ekuhlungeni ukwanda kwezinhlamvu zebhali uma kuqhathaniswa nokulawulwa okungezona okwenzelwe indodana (Isithunzi 1). Isikhathi sokuhluma se-Maximum mean sabhalwa ukuthi isisombululo se-20% samandla kanye nesilinganiso esiphansi sisho ukuhluma kwesikhathi sabhalwa ukufakwa kwamandla kagesi angu-100 (umdwebo 2).
Ukukhula okuphezulu nokukhiqiza nge-ultrasonics
I-Sonication nayo ibonakalisiwe ekuthuthukiseni imbewu yokuhluma kwezinkukhu, ukolweni, utamatisi, pepper, isanqante, isithombo, ummbila, ilayisi, ikhabe, i-sunflower nezinye eziningi.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza ngamandla athembekile aphezulu ama-ultrasonicators webhu, ibhentshi phezulu kanye nokusetshenziswa kwezimboni. Ukuze imbewu ye-seeding ne-malting ngezinga lokuthengisa, sincoma wena izinhlelo zethu zezimboni ze-ultrasonic ezifana ne- I-UIP2000hdT (2kW), I-UIP4000hdT (4kW), I-UIP10000 (10kW) noma UIP16000 (16kW). Ama-reactors flow cell-cell kanye nezesekeli baqedela ibanga lethu lomkhiqizo. Zonke izinhlelo ze-Hielscher zisebenza ngokuqinile futhi zakhiwe ngomsebenzi we-24/7.
Ukuze uhlole futhi ukwandise inzalo ye-ultrasonic ye-priming nokuhluma, sikunikeza ithuba lokuthi uvakashele inqubo yethu egcwele ye-ultrasonic lab ne-centre lobuchwepheshe!
Xhumana nathi namuhla! Siyajabula ukuxoxa nawe ngenqubo nawe!
Ukuhluma Okuthuthukisiwe ngu
Goussous, SJ; I-Samarah, i-NH; I-Alqudah, AM; Othman, MO (2010): Ukwandisa imbewu ukuhluma kwezinhlobo ezine zezitshalo usebenzisa inqubo ye-ultrasonic. Izolimo zokuhlola, 46/02, 2010. 231-242.
Nilsson, Frida (2009): I-Study of Barley amaprotheni Ukubunjwa ngesikhathi seBra Brewing Process usebenzisa i-SE-HPLC. Umsebenzi we-Degree usebenza eNyuvesi yaseKalmar, iSikole se-Pure ne-Applied Natural Sciences, eSweden.
U-Yaldagard, uMaryam; I-Mortazavi, Seyed Ali; I-Tabatabaie, Farideh (2008): Ukusetshenziswa kwama-ultrasonic wave njengendlela yokwenza ngcono ukusheshisa nokuthuthukisa ukuhlwanyelwa kwembewu yebhali: ukulungiswa kokusebenza ngendlela yokuThukela. J. Inst. Brew. 114 (1), 2008. 14-21.
U-Yaldagard, uMaryam; I-Mortazavi, Seyed Ali; I-Tabatabaie, Farideh (2007): Ukuphumelela Kwe-Ultrasound Treatment ekukhuthazeni Ukuhluma Kwembewu Yasebhali nomsebenzi wayo we-Alpha-Amylase. I-International Journal ye-Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 1/10, 2007.
Amaqiniso ngeBhali & I-Malt
Ukulimaza okusanhlamvu okusanhlamvu kuhluma futhi kuhilela izinyathelo ezintathu: ukugcina, ukuhluma kanye nokuvutha. Ngesikhathi sokugcoba, amanzi ayengezwa ezinhlameni ezivusa ama-enzyme. I-steeping evamile ithatha izinsuku ezingu-1-2. Ngemuva kwezinsuku ezingu-1-2 amabhali e-barley afinyelele kokuqukethwe kwamanzi angama-40-45%. Ngalesi sikhathi, ibhali lisuswa emanzini okuphuza futhi ukuhluma kuqala.
Ngesikhathi sokuhluma ama-enzyme amaningana akhiwa noma asebenze, okuyinto kamuva ekusebenzeni kwe-mashing kubalulekile. I-β-glucans idilizwe yi-endo-β-1,4-glucanase ne-endo-β-1,3-glucanase. I-Endo-β-1,4-glucanase isivele ikhona ebhali, kodwa i-endo-β-1,3-glucanase ikhona kuphela e-malt. Ngenxa yokuthi i-β-glucans ihlanganisa i-gel futhi ngaleyo ndlela ingakwazi ukubhekana nezinkinga ekuhlungeni, okuqukethwe okuphezulu kwe-β-glucanase nokuqukethwe okuphansi kwe-β-glucan kuyadingeka ku-malt. I-starch content iyancipha futhi okuqukethwe kokushukela kwanda ngesikhathi kuhluma kanti isitashi sihlaselwa yi-α-amylase ne-β-amylase. Ayikho i-α-amylase ekhona ebhali; ikhiqizwa ngesikhathi sokuhluma, kanti i-β-amylase isivele ikhona ebhali. Amaphrotheni nawo ahlaziywa ngesikhathi sokuhluma. Ama-peptidase ahlaziye ama-35 - 40% amaprotheni abe yizinto ezincibilikayo. Ngemuva kwezinsuku eziyisihlanu kuya kwezingu-6 ukuhluma kuqediwe futhi izinqubo zayo zokuphila zingasebenzi ngendlela yokubilisa. Ngokubilisa amanzi kususwa ngokudlula umoya oshisayo nge-malt. Lokhu kumisa ukuhluma nokuguqulwa, futhi kunalokho umbala wekhamera kanye ne-flavor isakhiwe yi-Maillard ukusabela.
Ama-enzyme ku-Malting & Inqubo yokubamba
Ama-enzyme abaluleke kunawo wonke we-hydrolysis of isitashi ebhalini yi-α-amylase ne-β-amylase enzymes eyenza ukuthi i-hydrolysis ye-starch ibe ushukela. Ama-amylase ahlambalaza i-polysaccharides, okuyi-starch, ku-maltose. I-β-amylase ikhona ifomu elingasebenzi ngaphambi kokuhluma, kuyilapho i-α-amylase ne-protease ivela lapho kuhluma. Njengoba i-α-amylase ingenza noma yikuphi ku-substrate, ijwayele ukuba yenze ngokushesha-kakhudlwana kune-β-amylase. I-β-amylase ivuselela i-hydrolysis yesibili isibopho se-α-1,4 glycosidic, isusa ama-unit amabili we-glucose / maltose ngesikhathi esisodwa.
Amanye ama-enzyme, njengama-protease, aphule amaprotheni okusanhlamvu abe amafomu angasetshenziswa imvubelo. Kuncike ekutheni inqubo ye-malting ivaliwe, umuntu uthola isilinganiso se-starch / enzyme ekhethiwe kanye nesitashi esiyingxenye eguquguqukayo ibe ushukela ongavuthayo. I-Malt iqukethe amancane amanye amashukela, afana ne-sucrose ne-fructose, okungewona imikhiqizo yokuguqulwa kwesitashi kepha kakade kakade okusanhlamvu. Ukuguqulwa okuqhubekayo ku-ushukela ovuthayo kutholakala ngesikhathi senqubo.
Ngesikhathi i-hydrolysis enzymatic, ama-enzyme athola inqubo yokuhlanjululwa okusho ukuthi ama-carbohydrate (isitashi) aphulwe abe yi-molecule. Nge-hydrolysis, isisetshenziswa samandla (isitashi) siguqulwa sibe ushukela esidliwa yigciwane lokukhula.
Ibhali linokuqukethwe kwamaprotheni okuyi-8 ukuya kuma-15%. Amaprotheni e-barley asebenza ngokuyinhloko ekwenzeni izinga le-malt nobhiya. Amaprotheni ayenamanzi ayabalulekile ukugcinwa kwekhanda nenhloko.
I-Arabinoxylans ne-β-glucan eBhali
I-Arabinoxylans ne-β-glucan yizintambo ezidliwayo ezidliwayo. Izitshalo ze-Malt zingaqukatha amazinga aphezulu ama-arabinoxylans angabangela ubunzima phakathi nokuhlunga kusukela kukhishwe ama-viscous angase ahlasele kakhulu ukusebenza kwezinqubo zokuphuza. Ngenqubo yokuphuza, okuqukethwe okuphezulu kwe-β-glucan ebhali kungabangela ukungcola okwanele kwezindonga zamangqamuzana, okuvimbela ukusabalalisa kwama-enzyme, ukuhluma kanye nokwakhiwa kwezinqolobane ze-kernel, ngakho-ke kunciphisa ukukhishwa kwe-malt. I-β-glucan ehlala njalo ingase iholele ekutheni i-wort evulekile kakhulu, edala inkinga yokuhlunga ebhodini, futhi ingabamba iqhaza ekukhuliseni ubhiya, okwenza kube nzima. Ama-Arabinoxylans atholakala ezindongeni zebhali, i-oat, ukolweni, i-rye, ummbila, irayisi, ukhula namabele. Ukukhipha kokubili ama-arabinoxylans ne-β-glucan kunyuke kakhulu nge-sonication.
Ibhali liqukethe ama-proanthocyanidins angaphezu kuka-50 kuhlanganisa i-oligomeric ne-polymeric flavan-3-ol, i-catechin ne-gallocatechin. I-Dimeric proanthocyanin B3 ne-procyanidin B3 yizona eziningi kakhulu ebhali.
Ama-antioxidants ayaziwa ngokukwazi ukulibazisa noma ukuvimbela ukusabela kwe-oxidation kanye nokuphendula okukhululekile kwe-oksijeni, okwenza kubaluleke kakhulu kwinqubo yokulimaza nokuphuza. Ama-antioxidants (isib. Ama-sulfites, i-formaldehyde, i-ascorbate) asetshenziswa njengezithasiselo ohlelweni lokuphuza ukuze kuthuthukiswe ubumnandi bebhiya. Cishe amaphesenti angama-80 wezinhlobo ze-phenolic ebhiya atholakala kumalt yebhali.